Mampiasa ny haino aman-jery sosialy mba hambolena ny hetsika manaraka | Martech Zone
Alarobia, Aprily 11, 2012 Alahady, Septambra 30, 2012 Eric Olson
Rehefa misy izany haino aman-jery sosialy sy marketing amin'ny hetsika, ny lesona dia izao: manomboka mampiasa azy NOW - fa alao antoka fa hihaino ianao alohan'ny hitsambikinana. Ireo mpampiasa media sosialy dia nihoatra ny mpisera mailaka manerantany telo taona lasa izay ary ny tambajotra sosialy dia vinavinaina hitombo hatrany ihany. Hevero ho toy ny fantsom-pifandraisana mihoatra ny fitaovana fampiroboroboana na fanoloana dokam-barotra ny media sosialy. Ireo sehatra fifanakalozan-kevitra iraisana amin'ny maro dia tsy dia mahomby firy. Ka ny fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny nomerika ankehitriny dia mitaky mpikarakara hetsika hamela kely ary hanamora ny fifandraisana "maro-amin'ny-maro".
Alohan'ny hanakatonanao ity takelaka ity hanavaozana ny kaontinao Twitter dia andao hodinihina ireo dingana efatra amin'ny fampiasana drafitra media sosialy mahomby amin'ny hetsikao.
Fantaro - Ny dingana voalohany dia ny fahalalana ireo mpihaino tadiavinao. Tadiavo ny vondrom-piarahamonina izay efa an-tserasera ary miahy ny antony. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany na fikarohana ho an'ny mpanatrika, fampiantranoana chat amin'ny twitter, na fanombohana vondrona iray ao amin'ny LinkedIn. Na inona na inona fomba safidinao, zava-dehibe ny fijerena ity tambajotra sosialy ity ho toy ny vondrona ambasadaoro mety ho marika, koa alao antoka fa hitondra azy ireo amin'ny fanajana amin'ny Internet.
Henoy - Ny fanajana an-tserasera dia toy ny fitsipi-pomba fety, tsy tokony hanatona vondron'olona fotsiny ianao ary hanomboka hiantsoantso azy ireo. Zava-dehibe ny mihaino aloha, mahafantatra ny zavatra mahaliana azy ireo, ary avy eo mampiseho fa mihaino ianao amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny atin'ny hetsika mba hifanaraka amin'ny filana sy ny filan'ny mpanatrika. Ny fizarana atiny ahafahana mamorona feo sy resaka manodidina ny hetsika dia mahomby raha tsy liana ny mpihaino anao ka henoy hatrany alohan'ny hamoahana azy.
Plan - Ity dia dingana roa misy ny atiny sy ny sehatra.
Atiny: Ampifanaraho amin'ny tanjaky ny telovolana na isan-taona hatrany ny paikadin'ny media sosialy. Ny fananana tanjona kendrena mazava hametahana toerana misy anao dia hanampy anao handrefy ny ezaka ataonao amin'ny fomba mahomby sy hanatsara ny fifandraisanao. Ity drafitra ity dia hanome anao sary mazava tsara ny antony maharitra hanohizanao ny mpanatrika hetsika mandritra ny taona sy ny atiny hanaovana izany.
Platform: Raha vantany vao manana drafitra momba ny atiny ianao dia alao antoka fa manana sehatra napetraka ianao mba hirotsahan'ny olon-kafa. Misy sehatra maimaimpoana toa ny LinkedIn na Twitter fa misy ihany koa ny forum misy karama toa ny fizakan-tena, vondrom-piarahamonina maharitra na tranokala mifantoka amin'ny hetsika hitrandrahana sy hanangonana hetsika avy amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany ary hampifanaraka izany amin'ny fahalianana sy ny fampahalalana avy amin'ilay hetsika. .
Afoizo - Ny marina sarotra dia ny fahatokisan'ny mpanatrika anao izao ny sakaizany mihoatra noho ny fahatokisany ny fikambanana misy anao. Ekeo fa zavatra tsara ny tsy fanaraha-maso ny fifanakalozan-kevitra momba ny hetsika. Ny fifanakalozan-kevitra mialoha, eo amin'ny toerana, ary aorian'ny hetsika amin'ny media sosialy dia natao ho fifangaroan'ny fiaraha-monina biolojika mifanohitra amin'ny fifehezana sy ny endrika. Ny tanjonao dia ny hamorona ambasadaoro izay manaitaitra ny fikambanananao, ary ampitao azy ireo fitaovana tianao hizaran'izy ireo. Avy eo, omeo fahalalahana izy ireo hampandre ny tambajotra. Midika izany fa mila fahazotoana fanampiny mba hahazoana antoka fa ny atiny rehetra zarainao amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina media sosialy dia azo heverina ho tsara. Raha vita tsara, ity tafiky ny evanjelista ity dia afaka mitarika mpanatrika betsaka noho ny doka rehetra.
Ny zava-mitranga dia voajanahary ara-tsosialy, fotoana ahafahana mifandray amin'ireo olona mitovy hevitra sy miresaka lohahevitra mahaliana, toy ny media sosialy, izay mahatonga azy io ho fanitarana voajanahary tonga lafatra amin'ny hetsika. Araho ireo dingana ireo ary afaka manangana vondrom-piarahamonina mirotsaka an-tsehatra manodidina ny hetsikao sy manodidina ny fikambanananao ianao. Vokatr'izany, ny fiantraikan'ny hetsikao dia hitanjozotra mihoatra ny rindrin'ny efitrano fivoriana ary ny fiakarana vokatr'izany dia manantena ny hipetraka ao amin'ny seho hetsika manaraka.
Tags: fampiroboroboana ny hetsikafampahalalana momba ny hetsika marketingfampiroboroboana ara-tsosialy
Eric Olson no tale jeneralin'ny SMB Events ao Tambajotra mavitrika, Vahaolana ara-barotra. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny paikady manerantany sy ny P&L ho an'ny vahaolana momba ny hetsika fandraharahana ataon'ny orinasa manompo orinasa kely, orinasa ary orinasa mpivarotra sy fampirantiana. Nahazo diplaoma tao amin'ny University of State of Colorado izy ary mandray anjara mavitrika amin'ny fanaovana ski sy fandraisana anjara amin'ny triathlons.